Walcott Oo Xalay Isbitaal La Seexiyey Kadib Markii Uu Dhaawac Ka Soo Gaaray Kulankii San Marino - jornalizem
Walcott Oo Xalay Isbitaal La Seexiyey Kadib Markii Uu Dhaawac Ka Soo Gaaray Kulankii San Marino
Ciyaaryahanka kooxda Arsenal Theo Walcott ayaa isbitaal la dhigey xalay kadib markii ay isku dhaceen goolhayaha xulka San Marino Aldo Simoncini shan daqiiqo markii ay socotay kulankii xalay ee isreebreebka koobka adduunka .
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Arsenal ayaa loo qaaday cusbital si raajo looga saaro xabadka ka dib markii uu la xanuunsaday qalad uu goolhayaha San Marino ku galay daqiiqadii afaraad, taasoo keentay inuu dhiig soo tufo islamarkana cusbital la seexiyo.
Walcott ayaa laga caawiyay in garoonka laga saaro, waxaana laga baqayaa in jab uu ka soo gaaray feeraha, taasoo sababi doonta inuu muddo dheer maqnaado, islamarkaana seego kulanka ay England la ciyaari doonto Poland.
Tababaraha England Hodgson ayaa yiri: “Theo isbitaalka ayaa la dhigey markii feeraha uu ka dhaawacmay, marna uma qaadan in goolhayaha uu si u la kac ah u sameeyey dhibkaan.
“Laakiin waxa ay ahayd in ciyaarta laga saaro anagana rigoore nala siiyo.”
Walcott ayaa isagoo aan wax dhaqdhaqaaq ah samayn dhulka yiil kadib markii ay jugta soo gaartay, hase ahaatee waxa uu u muuqday in uu ciyaarta sii wadan karo balse waxaa lagu bedelay Aaron Lennon.
Hodgson ayaa isagoo ka hadlaya dhaawaca soo gaaray Walcott waxa uu sheegay: “Labo habeen ayuu isbitaalka ku jiri donaa Theo. Baaritaan ayaa lagu sameyanayaa waxaan u rajaynaynaa in aysan noqon dhaawac weyn.
“Rigoore ayay ahayd, hubaal waxay ahayd qalad xun oo lagu galay Theo Walcott.”